Umyalezo ovela kuMartin Vrijland: Ixesha lokuthetha!
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	28 Januwari 2018	• 24 Comments
Emva kokubhala kweminyaka emihlanu kunye iminxeba rhoqo becela uncedo kunokwenzeka akusekho ukugcina lo msebenzi ixesha elizeleyo. Ngenxa abantu ezifana umqeshwa karhulumente Jeroen High Weij (ngoku uNahomi High Weij) i-intanethi izaliswe zonke iintlobo aphoswe ngodaba banyelise idilesi yam ezi zicatshulwa saa yaye yathathwa amaziko [...]
UMartin Vrijland waphuma waya ngaphandle kweNetherlands
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	13 Novemba 2017	• 0 Comments
Kwakuyixesha elibucayi kwiiveki ezimbalwa ezedlulileyo. Ngaphandle kokuba ndibe nexesha elibi kakhulu, kwakukho ukuhamba kwenye indawo. Oko kuthetha ukuba ndaphinde ndagqithisa indawo yam yokulwa ne-squat kwaye ngoku ndiqinisekile entabeni kwindawo ethile ekude apho ubomi buninzi kakhulu [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-21 Septemba 2017	• 3 Comments
UYeren Hoogeweij, umthombo wazo zonke izityholo kunye nokunyundela okungafunyanwa ngoMartin Vrijland kwi-intanethi, akazange afihla ubuni bakhe. Uninzi lwezinto ezithe zafumaneka kwi-intanethi kwimilayezo engaqinisekanga zivela kuJeren kwaye zineenjongo ezicacileyo ukuthembeka kwamanqaku [...]
ULUNTU UMartin Vrijland wasuswa ebhedini lakhe ngokubamba iqela
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-8 Septemba 2017	• 35 Comments
Umyalezo ovela kumlawuli: "UMartin Vrijland waphakanyiswa ebhedeni lakhe kulo mva ngecandelo lokubanjwa. Ngokwegqwetha lakhe, wathathwa kwintolongo entsha yasejele eZaandam. Isizathu esisemthethweni sokubanjelwa kwakhe asikaziwa kwaye igqwetha lakhe lithi uMartin usekuthunjweni. Ngoko ke akanako ukuvakalisa isizathu sokuba [...]
Iwebsite yokufudukela kwi-BeyondTheMatrix / uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	9 Juni 2017	• 0 Comments
Njengokuba abanye abafundi baye bakwazi ukugcina, iwebhusayithi ye-BeyondTheMatrix iye yaxhunyaniswa kwigama le-domain martinvrijland.nl ukususela ngezolo. Okukhethiweyo ukwenza oku kusekelwe kwizizathu ezahlukahlukeneyo, kodwa ngokukodwa ngenxa yegama elinzima kunzima ukukhumbula abafundi abatsha. Ndilinde ixesha kunye nale nto, kuba ayiluncedo [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	9 Oktobha 2016	• 29 Comments
Ngaba uyazi ukuba loo hypnosis ibonisa kubantu abanjengoRasti Rostelli. Zizo ezo zibonisa apho i-hypnotist ikuvumela ukuba uyenze okanye ukholelwe izinto ongeke uyenze ukuba uyazi. Kuba lunomdla xa ufumanisa ukuba kukho iindlela ze-hypnosis ezingekho kwi-trance-like [...]
UMartin Vrijland unyanzelekile ukuyeka * Ukuhlaziya *
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-24 Septemba 2016	• 3 Comments
Kudala ndihlaselwe yizo zonke iindawo ezicacileyo ukuba baye bakwazi ukulahlekisa ukuhlambalaza nokunyelisa uMartin Vrijland kwi-intanethi ngokungenakuhlulwa. Umgqugquzeli, uJeroen Hoogeweij, waqala ukusebenza kuRhulumente ngokwakhe. Iimpapasho ezichasene nale ntsholongwane kunye nokunyundela zisoloko zisesigxina kwiijaji. Iiwebhusayithi ezithi [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.512.602